कष्टकर जीवनशैलीः हिउँदमा जाजरकोट, वर्षामा रुकुम ! - Himalaya Post
कष्टकर जीवनशैलीः हिउँदमा जाजरकोट, वर्षामा रुकुम !
Posted by Himalaya Post | १९ श्रावण २०७५, शनिबार ०९:०२ |
जाजरकोट– बर्सेनि वर्षायाम सुरु हुने बित्तिकै पहिरोको डरले ओलगुत्ताकाका बासिन्दालाई घर छाडेर छिमेकी जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय नलगाड नगरपालिका–१३ ओलगुत्ताका बासिन्दा वषौँदेखि यसरी नै बसोबास गर्दै आएका हुन् ।
असार, साउन र भदौ महिनामा करीब ५० घरधुरीका बासिन्दा आफ्नो घर र जग्गा छाडेर जीवन बचाउन रुकुम आठबीसकोट नगरपालिकाको वडा नं ६ मा बस्दै आएका छन् । पानी पर्ने बित्तिकै घरमाथि रहेको ठूलो पहाडबाट ढुंगा खस्ने र पहिरो आउने डर भएकाले घर छाड्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीय तेजबहादुर विकले बताएका छन् । यस ठाउँमा पटक– पटक पहिरो आएर एकदर्जन मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।
पहिरोका कारण यहाँका बासिन्दाले घाँस, दाउरा गर्न र घरपालुवा जनावरलाई चरनका लागि लैजान पनि डराउने गरेको उनको भनाइ थियो । जोखिममा रहेका यो बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न कुनै पहल नहुँदा उनीहरू बर्सेनि घर छोड्न बाध्य भएका हुन् । पानी नपरेको समयमा दिउँसो गएर घरको काम गर्ने तर सुत्न भने रुकुम नै आउने गरेको अर्का स्थानीय शुक्रराज सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
यहाँ रहेको स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयसमेत माथि रहेको पहाडबाट पहिरो आउँछकी भनेर हेर्दै काम गर्नुपरेकोे शिक्षक भोलीप्रसाद विष्टले पिडा सुनाए । सञ्चार सेवासमेत भरपर्दो नभएको यस ठाउँमा कतिबेला के हुन्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो । भेरी नदीको किनारमै रहेको यो बस्ती जाजरकोटको अति विकट स्थान मानिन्छ । रासस
Previousपहिरोको कारण नारायणगढ – मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध
Nextनिद्रा लाग्दैन ? यी पाँच उपाय अपनाउनुहोस
विराटनगर वारियर्सले भित्र्यायो चार विदेशी खेलाडी, प्रशिक्षकमा उमेश पटवाल
१७ मंसिर २०७५, सोमबार १८:५६
पोज गर्दा के भनेका थिए निकले प्रियंका लाई?
१४ मंसिर २०७५, शुक्रबार १०:०९
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना र कोरना भाइरस रोक्न पशुपतिमा विशेष पूजा
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १५:०८
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १६:५६